Asus TUF Dash F15, simba uye dhizaini zvinogona kufambidzana | Gadget Nhau
Asus TUF Dash F15, simba uye dhizaini zvinogona kuenda pamwe chete
Miguel Hernandez | 25/07/2021 13:00 | General, Makomputa, Laptop, Reviews
Desktop makomputa ari kuwedzera asipo pamatafura, pachokwadi, kunyangwe ivo vatambi, vateereri vorudzi urwu rwemakomputa, vari kuenda kune inotakurika fomati mumakore achangopfuura nekuda kwemagadzirirwo matsva uye maficha ane simba avanopa.
Iyo Asus Dash F15 inouya kutafura yekuyedza, Laptop yemitambo ine zvakasarudzika maficha uye ine dhizaini inoita kuti ive inoshamisira. Tichaongorora zvakadzama iyi laptop yakakurumbira iyo yaungangodaro wakauya nekuda kwezvinhu asi kuti unozopedzisira watenga dhizaini, usapotsa.
Sezvo pane dzimwe nguva zhinji, iyo ongorora zadzisa vhidhiyo kumusoro ichakuratidza iyo unboxing uye ayo makuru dhizaini maficha. Usakanganwa kunyorera kune yedu YouTube chiteshi kuitira kuti tikwanise kuenderera nekukuunzira izvi zvinonakidza zvemukati. Kana iwe wakaifarira, unogona kuitenga paAmazon pamutengo wakanakisa
1 Zvishandiso uye dhizaini: Elegance isina hutsinye
2 Hardware uye GPU zvinotivimbisa ramangwana
3 Kubatana kwemarudzi ese
4 Kuedzwa uye kutonhora
5 Multimedia uye zvakajairika ruzivo
6 Pfungwa yeMupepeti
Zvishandiso uye dhizaini: Elegance isina hutsinye
Kana paine chimwe chinhu chinoita kuti ndisanetseke nezvemitambo yemakomputa, ndiwo mitsara yavo ine hukasha, iwo mavara avo anokatyamadza uye ukobvu hwavo hwakawandisa. Asus mune ino TUF Dash F15 inotora zvese izvo uye nekuipuruzira, semadhaimani. Tine komputa ine 19,9 millimeter mbiri, yakagadzirwa nesanganiswa yemasimbi nemapurasitiki inosangana neMIL-STD zviyero zvemauto, kusimba chinhu chakakosha mune zvese muzvigadzirwa zveASUS uye mune izvi zvaisazove zvishoma.
Tine kuwanikwa kwemaviri mavara, iyo Mwenje Wechiedza Muchena uye Eclipse Grey (Chaizvoizvo chena uye nerima grey). Pachikamu chepamusoro isu tine maTUF ekutanga uye logo nyowani yechiratidzo. Isu takaongorora iyo modhi mune yakasviba grey saka isu ticha tarisa pairi. Pamativi ese maviri isu tine panyama yekubatanidza chiteshi chatinozotaura nezvayo gare gare. Iyo yekuratidzira furemu, kunyangwe iri yakatetepa, ine yakati wandei pasi burr. Huremu hwese hwe2 kg, pasina kuve mushonga, chakareruka pane izvo zvinopihwa nechikamu.
Hardware uye GPU zvinotivimbisa ramangwana
Isu zviri pachena tichatanga nechinhu chakakosha kwazvo, tafura yematauriro matinosimbisa processor Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, 4 cores (12M cache, inosvika ku4,8 GHz). Kuti tifambe nayo, tinayo Windows 10 Imba pre-yakaiswa neyemahara Windows 11 kugadzirisa. Zvingaitwe sei neimwe nzira, uyu modhi unofambidzana ne mbiri 8GB 4MHz DDR3200 memory module, ine yakanyanya kugadziriswa inokwana inosvika 32 GB ye RAM.
Processor: Intel Core i7-11 370H 3,3 GHz, 4 cores
SSD: 512 GB SSD M.2 NVMe PCIe 3.0
GPU: GeForce RTX 3070 NVIDIA
Iko kuchengetwa kweyuniti yakaedzwa iri 512 GB yeMM.2 NVMe PCIe 3.0 SSD memory iyo inopa kumhanya mumiedzo yedu ye 3400 MB / s kuverenga uye 2300 MB / s kunyora, zvinopfuura zvakakwana kufambisa iyo OS nemitambo yemavhidhiyo. Tinogona, hongu, kusarudza iyo imwechete unit inokwana 1 TB.
Isu tava kutarisa izvo zvakakosha, iyo NVIDIA GeForce RTX 3070 iyo ichave iri pamusoro peiyo graphic chikamu uye iyo yakapa mune ayo mavhezheni «laptop» iko kuita muGeekbenck yemapoinzi 121069, padyo padhuze neiyo desktop desktop yeNVIDIA GeForce RTX3070.
Kubatana kwemarudzi ese
Tinotanga nekubatana kwepanyama, Padivi rekuruboshwe isu tine chengarava yemagetsi, yakazara Gigabit RJC45 chiteshi, HDMI 2.0b, USB 3.2 uye USB-C Thunderbolt 4 - Power Deilvery inoperekedzwa ne3,5mm Jack. Kudivi rerudyi tine maviri akajairwa USB 3.2 uye iyo Kensington keychain.
USB-C Kutinhira 4 PD
Zviripachena, kana iyo wired chikamu chazara kwazvo, neizvozvo USB-C inoenderana ne4K monitors pa60Hz uye nemitoro inosvika ku100W, kwechikamu chisina waya hachikwanise kuve kushoma. Tine Bluetooth 5.0 uye WiFi 6, Ichi chikamu chekupedzisira mumiyedzo yedu chakaburitsa kunopesana kunonzwika ne5 GHz network uko huwandu hwave hwakaganhurirwa zvakanyanya uye iyo ping inogona kunge isingaite sezvatinoda, tinokurudzira kushandisa tambo kunyangwe ihwo hunoenderana.
Kuedzwa uye kutonhora
Iyo komputa ine mana mafeni, 83 mashizha ega ega, uye yakagadziriswa anti-guruva kutonhora system. Mapaipi mashanu ekupisa akazara pachigadzirwa chose uye mhedzisiro yaive izvo zvaizotarisirwa kubva kune komputa yerudzi urwu pakati pezhizha, inopisa, inopisa kwazvo. Nekudaro, isu hatina kuwana mhedzisiro inotsamwisa kana kuti inosiyanisa zvakanyanya kubva kumakwikwi, saka kutonhora kunoratidzika kunge kwakakwana.
Tenga Asus TUF Dash F15 paAmazon
Mukuyedzwa kwedu, mashandiro emakomputa MuMaguta Skylines, Kudanwa kweDuty Warzone uye CS GO takave nemitengo yepamusoro yeFPS, pasina matambudziko ekuita kana kupisa. Nezvikonzero zviri pachena, iyo laptop inokwanisa kubata iyo yakawanda kwazvo yekatalog yako mune akanakisa ekuona mamiriro.
Multimedia uye zvakajairika ruzivo
Hatisi kuzoenda tisina kutaura nezve iyo skrini, isu tine 15,6-inch pani mu16: 9 ratio, Ini ndinoda ayo anti-glare kurapwa uye inokwanisa kuratidza zana yeiyo sRGB spectrum, ine mwero wekuzorodza we100 Hz iyo isiri yakaipa kune IPS pani. Ehezve, kupenya kunogona kuvandudzwa, kunyangwe isu tisina kuwana iyo chaiyo data maererano nekupenya kwayo pa cd / m120. Ruzha rwakajeka uye rune simba zvakakwana kuti unakirwe nemultimedia zvemukati, iine nzvimbo yakanaka mukati.
Iyo keyboard ine kufamba kwakanaka, yakafanana yakawanda yakawanda "mitambo" yemaitiro. Tine zvidzitiro zvechiso uye maRGB maLED pese pese nenzvimbo, ine yakazara offset ye1,7mm. Icho chinyararire, chimwe chinhu chinokosheswa, uye chinopindura zvakanaka. Hatigone kutaura zvakafanana nezve trackpad, zvinoita kunge zvidiki uye zvisina tsananguro, asi harisi dambudziko nekombuta iyi, asi nezve zvese izvo Apple isingagadzi. Isu hatina zvishoma zvekutaura nezve kuzvimiririra, zvinoenderana zvakanyanya nekutamba kwekuda, anopfuura maawa maviri, tinokurudzira kuti ushandise zvakabatana.
Laptop iyi chikamu cheiyo 1.299 yeiyo yekupinda vhezheni, inosvika ku1.699 euros yeiyo vhezheni yatakaedza, imwe nzira inonakidza kwazvo kumidziyo yatinayo pamusika nekuda kwekugadzirwa kwayo uye kugona kwayo.
€1299 a €1699
Yakatumirwa pa: 25 de julio de 2021
Kugadziridza kwekupedzisira: 25 de julio de 2021
Dhizaini yekuvandudza uye zvakanyatsopedzwa zvinhu
Hardware kuenderana nerinovimbisa ramangwana
Kunzwa kwakanaka kwekushandisa uye kubatana
Mumwe mutengo wakakwira
Inosanganisira adapta yeA / C pane USB-C
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Asus TUF Dash F15, simba uye dhizaini zvinogona kuenda pamwe chete
Amazon inovandudza iyo Alexa izwi kutonga uye isu takaiyedza
SoloCam E20, kamera yekunze ine hunyanzvi kubva kuEufy [Ongorora]